नेपालको समय: २०:१३ | UK Time: 15:28
कोरोनासंग जुध्न एनआरएनए सशक्त, हरेक एनसीसीमा एक जना ‘कोअर्डिनेटर’
लन्डन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वमा उत्पन्न असहस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) र सम्पूर्ण मुलुकहरुमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) बीच आज २१ मार्च...
एनआरएनए: समितिहरु १५ दिनमा पूर्णता
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आईएस) ले थप एक समिति निर्माण गर्ने भएको छ । शनिवार बसेको आईएस बैठकले उक्त निर्णय गरेको आइसिसि एनआरएनए प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।...
महासचिव शर्माको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले ‘भिजिट नेपाल’ विशेष समितिमा बस्न भट्ट असहमत
लन्डन । ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०’ लाई सहयोग गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले बनाएको बिशेष समिति महासचिवका कारण संकटमा परेको छ । महासचिव डा. हेमराज शर्माले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ विशेष समिति...
जग्गा खरिदमा संघ पीडित छः एनआरएनए
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन नहुने बताउंदै हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो चासो र सहमति रहेको बताएको छ । ‘बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम...
फ्रान्समा नेपालीमुलका अर्याल काउन्सिलर उम्मेदवार
लन्डन । नेपालीमुलका व्यक्तिहरु युरोपको राजनीतिमा सहभागी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसै क्रममा आगामी मार्च १५ र २२ तारिखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा फ्रान्समा नेपाली मुलका निर्मल अर्यालले काउन्सिलर पदमा उमेद्वारी दिएका...
निरुसालाई ‘मिस नेपाल युरोप २०२०’ को ताज
बेल्जियम । पहिलो पटक आयोजित ‘मिस नेपाल युरोप २०२०’ को ताज निरुसा खत्रीले जितेकी छन् । युरोपको राजधानी बेल्जियमस्थित शैक्षिक नगरी लुभेनमा आयोजित उक्त सौन्दर्य प्रतियोगितामा फिनल्यान्डकी निरुसालाई मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठले ताज...
स्पेनका लागि राजदूत शेर्पाद्वारा ओहदाको प्रमाणपत्र पेश
स्पेन । स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पाले स्पेनका राजा समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेकी छिन् । गत शुक्रबार स्पेनको राजधानी मड्रिडस्थित राजदरबारमा राजा फिलिपे छैठौंसमक्ष उनले ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेकी हुन् । राजदूत शेर्पालाई...
एनआरएनए दोश्रो बिज्ञ सम्मेलन धुलिखेलमा
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी अक्टोबरमा नेपालमा दोश्रो बिज्ञ सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलन काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा हुने भएको हो । पहिलो सम्मेलन सोल्टी होटलमा आयोजना हुंदा महंगो दर्ता शुल्क...
गैरआवासीय नेपाली संघको बैठक पोखरामा सम्पन्न, यस्ता छन् निर्णय
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रत्यक्ष बैठक जनवरी १८ र १९ तारिख गण्डकी प्रदेशको कास्कीस्थित रुपाकोटमा सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट...
माल्टाबाट पर्यटक पठाउन तीव्र पहल
लन्डन । युरोपको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य माल्टामा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुभारम्भ गरिएको छ । बेलायत तथा माल्टाका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो । नेपाली दूतावास लन्डनको आयोजना...
नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपमा नयां नेतृत्व
लिस्बन । नेपाल उत्पीडित जातीय समाज (नोप्स) युरोपको तेश्रो महाधिवेशन आइतबार पोर्तुगलको लिस्बनमा सम्पन्न भएको छ । महाअधिवेशनले अर्जुन सुनारको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षद्वयमा युकेका धनबहादुर सार्की...
बाग्लुङ समाज स्पेनले चैते दशैं विशेष कार्यक्रम गर्ने
स्पेन । बागलुङ समाज स्पेनले चैते दशैंको अवसर पारेर वार्सिलोनामा विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको समाजको बैठकले मार्च अन्तिम हप्ता उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यक्रम भब्य...
« अघिल्ला 1 …4567 8 … 167 पछिल्ला »